डा. गोविन्द केसी – Himalaya Television
संसद विघटनको विरोधमा डा. गोविन्द केसीद्वारा अनशन घोषणा
२० माघ २०७७ काठमाडौं । संसद विघटनको विरोध गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले अनशनमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ । चिकित्सा शिक्षाको विषयलाई लिएर १९ पटक अनशन बसेका केसीले पहिलो पटक राजनीतिक माग अघि सारेर आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको हो । डाक्टर...
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन र नागरिक समूहको प्रदर्शन
१७ असोज, २०७७ काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार र सर्वसुलभ उपचारको माग गर्दै अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । विभिन्न पार्टीका भातृ संगठन र स्वतन्त्र नागरिकले माइतीघरमा छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गरेका हुन्...
झरीको पर्वाह नगरि डा‍. केसीको समर्थनमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)
काठमाण्डौं : डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । केसीका समर्थकले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै केसीका माग पुरा गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले पटक–पटक निधेषित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीले रोकेको थियो । हेर्नुहोस्...
डा. गोविन्द केसी भोलि काठमाडौं आउँदै, सत्याग्रह कायमै
५ असोज, २०७७, बाँके । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी भोलि काठमाडौं आउनु हुने भएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीलाइ आज नेपालगञ्ज ल्याइएको छ । आज उहाँ भेरी अस्पतालमै अनसन बस्नुभएको छ ।...